Mid ka mid ah Life: Waxaa La wadaag — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Michaella • August 19, 2013 at 8:22 waxaan ahay • Reply
i waxaa jiray!!! aad ahaayeen cabsado!
Jessica Dunson • August 19, 2013 at 8:22 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay fariin this wadaago. Waxaan loo baahan yahay xaqiijinta ka yimid Ilaah ku saabsan oo uu injiilka dadka kale la wadaago ee aniga ii gaar ah University oo waxaan u helay iyada oo fariin this. sida runta ah waxaan this loo baahan yahay. Ilaah ha barakeeyo.
Adrienne Kelly • August 19, 2013 at 8:23 waxaan ahay • Reply
Brad Ball • August 19, 2013 at 8:23 waxaan ahay • Reply
Olli Pamplin • August 19, 2013 at 8:23 waxaan ahay • Reply
aad baad u mahadsan tahay for this wadaago, i runtii loo baahan yahay si ay u maqlaan.